Barreeffamni waa'ee ajjeeffamuu Jamaal Kashoogjii mul'isu gaazexaa irratti maxxanfame - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Barruun kun akka jedhutti Jamaal Kashoogjii ajjeefamuu isaan dura kannen isa ajjeesan akka afaan isaa hin ukkaamsine gaafachaa ture
Gaazexaan biyya Tarkii 'Sabah' jedhamu battala ajjeefamuu gaazexeessaa biyya Sa'uudii Arabiyaa Jamaal Kashoogjii irratti ragaa walitti qabate barreessuun maxxanseera.
Gaazexeessaan mootummaa qeequudhaan beekamu Jamaal Kashoogjii Onkoloolessa darbe waajjira qoonsilaa Sa'uudii Arabiyaa Tarkii magaalaa Istaanbul keessatti argamutti ajjeefame.
Barruun mootummaa Tarkii kun ragaan barreeffamaa fi waraabbiin battala ajjeefamuu Kashoogjii waajjira sana keessatti erga raawwatee booda qaamolee tikaa mootummaa Tarkiitiin qabamanii akka turan ibseera.
'Jamaal Kaashogjiin battaluma ol seeneen hudhamee ajjeefame'
Ragaan kun hafuura ishee dhumaatiin waan gaazexeessaan kun jedhefaa of keessaa qaba.
Baruu 'Washington Post' jedhamuuf barreessaa kan ture gaazexeessaa Jamaal Kashoogjii erga tasa dhabamee booda Onkoloolessa 2, 2018 osoo waajjira qoonsilaa Sa'uudii Arabiyaa Istaanbul keessatti argamu seenuu mul'ate.
Jamaal Kashoogjii kan achitti argameef gaa'ila isaa raawwachuuf waraqaa isa barbaachisu fudhachuuf ture.
Iccitiin ajjeefamuusaa Sa'uudii Arabiyaan gama hundaan akka shamkkamtu taasiseera, Sa'uudiinis waa'ee ajjeefamuusaa odeeffannoo wal dhahu gadi dhiisuu eegalte.
Aanga'oonni Sa'uudii Arabiyaa gocha raawwatame balaaleffachuun namoota yakka ajjeechaa sana keessatti hirmaataniiru jechuun shakkan 11 mana murtiitti himataniiru.
Gaazexaan kuni maal jedha?
Waa'ee iccitii ajjeefamuu gaazexeessaa Jamaal Kashoogjii bal'inaan kan gabaasaa ture barruun 'Sabah'lubbuun nama kanaa garee haleeltotaa qindaa'aniin darbuu maxxansa tibbanaa keessatti eereera.
Image copyright Middle East Monitor
Barruun kun ragaa qorannoo poolisii ' forensic' , garee Sa'uudii irraa ergamuun ajjeechaa raawwatan, gareen kun utuu gaazexeessichi achi hin ga'in dura 'bineensa aarsaa ta'uu qabu' ittiin jechaa akka turan kanneen jedhanirratti ragaa qindeessedha kan inni maxxanse.
Akka barruu kanaatti Kashoogjiin waajjira qoonsilaa sana keessatti miirri shakkii fi rifaatuu akka itti dhagahamee fi hatattamaan gara Riyaad akka deebi'u ajaji 'Interpol' irraa isa ga'ee ture.
Ajaja sana kan dide gaazexeessaan kun ilmasaaf erga barreeffamaa akkuma ergee ka'een garee wayiitiin butamee haleelame, akka barruun kun jedhutti.
Gaazexeessaa Jamaal Kashoogjii battala ajjeefamu sanatti hafuura ishee dhumaatiin warra isa ajjeesuun'afaan kiyya na hin ukkaamsinaa' jedhee watawaataa akka turee fi yeroo xinnoo booda akka of wallaale barruun kun ibseera.
Akka barruun 'Sabah' gabaasetti gaazexeessichi gototamee arga gadi baafamee booda bakka kufetti ba'aa irra tuulame jalaa naasuudhaan garmalee harganaa ture.
Boodarras ragaa garee qorannoo poolisii 'forensic' irraa waraabbiidhaan argateen qaamni gaazexeessichaa ciccitee akka dhume ibsa barruun kun.
Waa'een waraabbii sagalee ajjeefamuu Jamaal Kashogjii bara darberraa eegalee gabaasamaa jira.
Qondaaltonni mootummaa Tarkii ragaan kun akka jiru dhugaa bahaniiru, mootummoota addunyaaf akka qoodanis ibsan, garuu barruun 'Sabah' akka argatee akka maxxanse ifa miti.
Ajjeechaa Kaaashoogjii: CIA'n ilma mootichaatti quba hin qabne jedhan Traamp